Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarkii lagu qaaday Xarunta Isgaarsiinta Hormuud - Jowhar Somali news Leader
Home News Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarkii lagu qaaday Xarunta Isgaarsiinta Hormuud
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarkii lagu qaaday Xarunta Isgaarsiinta Hormuud
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerarkii lagu qaaday Xarunta Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Jaldeys ee degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasiirka Boostada iyo Isgaariinta Eng. Cabdi Canshuur Xasan oo dhacdadan ka hadlayay ayaa ku baaqay in degdeg loo joojiyo weerarrada soo noqnoqdey ee lala beegsanayo Isgaarsiinta Gobollada Jubooyinka iyo Gedo.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan ugu dambeeyey uu waxyeello weyn u geystay dhismihii iyo qalabkii xarunta shirkadda Hormuud ee deegaanka Jaldeys, taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha shacabka deegaanada ku xeeran degmada Afmadow.
“Waxa aan ka xunnahay in ay weli sii socdaan weerraradan oo si weyn u dhibaataynaya ganacsiga iyo nolosha shacabka deeganada Jubooyinka, waxa aan hubnaa in cidkasta oo ka dambeysa falkan degdeg loola xisaabtami doono” ayuu yiri wasiir Cashuur.
Wasiir Canshuur ayaa si gaar ah cidna ugu eedeyn weerarkan, inkastoo war saxaafadeed ka soo baxay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud lagu eedeeyay Ciidamada Kenya inay ka dambeeyeen, dhowr jeer oo hore xarumo ay laheyd Shirkadda burburiyeen.
Ugu dambeyn Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ayaa sheegtay inay diiwaangelisay khasaarooyinkii naf iyo maalba lahaa ee ka dhashay weerrarada loo geystay shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee deeganada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaana ay cadeysay inay kala shaqeysanayso Wasaaradda Arrimaha Dibedda sidii looga qaadi lahaa tallaabooyinka ku habboon si waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Guddiga Qaban qaabada Doorashada Xildhibaanada iyo Senatarada Gobolada Waqooyi oo la magacaabay
Duqeyn ka dhacday deegaano ka mid ah gobolka Gedo
Qarax is miidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho